त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारलाई जान नदिएपछि यस्तो ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारलाई जान नदिएपछि यस्तो !
काठमाडौ । काठमाडौ स्थित त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे आइपुगेको समाचार लिन पुगेका पत्रकारलाई विमानस्थल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । नरवणे बुधवार दिउसो तीन दिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौ आइपुगेका छन् । केही ब्यक्ति र संस्थाका प्रतिनिधिले नरवणेलाई कालो झण्डा देखाउने भन्दै अभिब्यक्ति दिएका कारण सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ ।
विमानस्थलमा पत्रकारलाई उनको तस्बिर लिन र समाचार संकलन गर्न समेत रोक लगाइएको छ भने नरवणे हिड्ने स्थल रुटको पनि जानकारी दिइएको छैन । भारतीय सेनाको विशेष विमानबाट उनी यहाँ आइपुगेका हुन्।
तर त्रिभुवन विमानस्थलमा भने फोटो खिच्नको लागि पत्रकारलाई रोक लगाइएको छ। त्यो रूटमा हिँड्ने सवारीमा पनि सुरक्षा जाँच कडाइ गरिएको छ।
कालापानी(लिपुलेक सीमाबारे बोलेका कारण आलोचित नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ सेना प्रमुख दिन नहुने भन्दै विरोध भएको थियो । त्यही भएर उनको आगमनको पनि विरोध हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ।
उनी कात्तिक २१ गतेसम्म नेपाल रहनेछन्। उनले नेपाल भ्रमणका क्रममा सैनिक मञ्चको वीर स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण, जंगी अड्डामा सम्मान गारद निरीक्षण तथा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग छलफल लगायत कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजका शिक्षार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम छ। तस्बिर रातोपाटीका नारायण महर्जन
जब बाउछोराको श व घरको आगनबाट संगै उठाउनु पर्यो, गाउँ नै शोकमा!!